Global Voices teny Malagasy » ‘Tsy hitsahatra aho’: Lehilahy Kazakh mikatsaka ny rariny ho an’ny fianakaviany raikitra ao Xinjiang any Shina noho ny famoretana · Global Voices teny Malagasy » Print
‘Tsy hitsahatra aho': Lehilahy Kazakh mikatsaka ny rariny ho an'ny fianakaviany raikitra ao Xinjiang any Shina noho ny famoretana
Voadika ny 22 Febroary 2019 15:33 GMT 1	 · Mpanoratra Chris Rickleton Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Ny ray aman-drenin'i Akikat Kaliolla Kaliolla Tursynuli  sy Venera Mukatai . Sary nomen'i Akikat Kaliolla ary nahazoana alalana.
Tamin'ny volana Martsa 2018, tsy naharay vaovao intsony avy amin'ny fianakaviany miisa efatra mipetraka ao amin'ny faritra mizaka-tena Uyghur ao Xinjiang (XUAR) any Shina i Akikat Kalliola, teratany Shinoa nomena ny zom-pirenena Kazakhstan.
Taorian'izay dia reny avy tamin'ny namany sy ny olom-pantany tao amin'ny Kaominin'i Emin, XUAR, fa samy voatazona ao amin'ny “toby fiarenana  ” an'ny Antoko Kaomonista ao amin'ny faritra ny reniny, ny rainy ary ny rahalahiny roa.
Nohamarinin'ireo manampahefana Shinoa, ny fisian'ireo antsoin'izy ireo hoe “foiben-talenta”, izay Miozolomana vitsy an'isa no betsaka ao, hitandroana ny “firindràna” ao Xinjiang, ary anisan'ny ampahany amin'ny ezaka goavana hiadiana amin'ny “fisintahana” sy ny “fivakisana”.
Nilaza ireo manampahefana  Shinoa fa an-tsitrapo ny fandraisana anjaran'ny mponina ao amin'ny foibe, izay antsoin'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena matetika hoe “toby fiarenana”.
Niafara  tamin'ny famintinana samihafa ny famelabelarana nataon'ny manam-pahaizana avy ao amin'ny Firenena Mikambana tamin'ny taon-dasa. Nolazaina ary fa mihoatra ny iray tapitrisa ireo vitsy an'isa tsy vondrom-poko Han – indrindra fa Uyghurs, fa misy ihany koa Kazakhs, Kyrgyz ary Hui – no notazonina tao amin'ny foibe tsy araka ny sitrapon'izy ireo.
Naneho  ny tatitra avy amin'ireo masoivohom-baovao iraisam-pirenena toy ny Reuters fa nohamafisina toy ny fonja ny tranobe, raha ny tatitra nataon'ny AFP kosa dia nanaporofo  fa manam-pitaovana toy ny fonja izany. Nilaza ampahibemaso ny tahirin-kevitra fa nividy kibay marobe ho an'ny polisy, karavasy, gadra rojovy ary tsifitra lakrimozena ny tompon'andraikitra ao an-toerana izay manara-maso ny foibe toy izany, hoy ilay tatitra.
Fivoahana mamy mangidy avy ao amin'ny ‘toby fiarenana’
Nanjary fanjakan'ny polisy i XUAR taorian'ny nahazoan'i i Chen Quanguo, manampahefana Kaomonista hiringiriny, toerana ambony tao an-toerana ho toy ny sekreteram-paritra ho an'ny Antoko Kaomonista tamin'ny taona 2016. Nahatonga ny faritra naraha-maso bebe kokoa mihitsy aza izany noho ny faritra hafa ao Shina.
Ankoatra ny fametrahana ireo foibe malaza ratsy dia manara-maso ny fitomboan'ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana i Chen izay famoretana henjana atao amin'ny finoana Miozolomana ifampizaràn'ny mponina maro ao amin'ny faritra ary manamafy ny famerana ny fahafahana mihetsika.
Tena niantraika tamin'ireo Kazakh miisa 1.500.000 ao XUAR izay manana rohim-pianakaviana amin'i Kazakhstan mpifanolo-bodirindrina aminy ny ankamaroany ny farany tamin'ireo fepetra ireo.
Nahazo vaovao mahafaly tamin'ny fiandohan'ity taona ity i Akikat Kaliolla, izay nifindra monina tany Kazakstan, toerana naha olom-pirenena ny vadiny talohan'ny nahazoan'i Chen asa. Navotsotra tao amin'ity toby ity ny telo tamin'ireo fianakaviany efatra ary niantso azy tamin'ny 27 Janoary lasa teo- ny zandriny roalahy sy ny reniny.
Niahiahy izy nandritra ny herintaona fa tsy ho zakan'ny havany ny hiatrika ny fitazonana azy ireo. Nandre tsaho ihany koa izy fa novonoina ireo rahalahiny tamin'ny fotoana maro samihafa tamin'izany fotoana izany.
Saingy novesaran'ny fanambarana nandravarava andro vitsivitsy monja talohan'ny niantsoan'izy ireo ny sentony. Nilazana ny vadin'i Akikat nandritra ny fitsidihany tany amin'ny masoivoho Shinoa tao Almaty, Kazakhstan fa voasazy higadra 20 taona an-tranomaizina noho ny “fitsabahana raharaham-panjakana” ny rafozandahiny 70 taona .
Tsy nanaiky ny fanambaran'ny masoivoho i Akikat hatramin'izao.
Matahotra izy- ny ratsy kokoa noho izany aza – fa ho faty noho ny tsy fahasalamany ny rainy noho ny fisamborana tsy ara-drariny, ary fanafenana fotsiny ihany ny filazan'ny masoivoho momba ilay sazy.
Niteny tamin'ny reniny izy ao anatin'ity lahatsary etsy ambony ity fa “tsy hitsahatra ny fanangonan-tsonia ataony” amin'ny raharahan'izy ireo mandra-paha afak'izy efatra mianaka soamantsara.
Avy amin'ny soso-kevitry ny reniny nandritra ny antso nifanaovan'izy ireo mba ho amin'ny “tenim-pirenena” shinoa fa tsy tamin'ny tenin-drazany kazakh no ifampiresahana no manondro fa mety notanana any amin'ny toerana manokana izy telo mianaka ary tena arahi-maso akaiky .
Niresaka momba ny fiarovana henjana ho an'ny rainy sy ho an'ny Kazakhs marobe izay nosamborina tsy ara-drariny tao amin'ny faritr'i Emin i Akikat tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny fampitam-baovao vahiny. Mahita izany ho antony  iray nahatonga ny fianakaviany ho lasibatra izy.
” Kanosa ny Kazakh sasany. Tsy milaza na inona na inona mikasika ny zava-mitranga amin'ny mpiara-monina izahay raha tsy mitranga aminay izany, ” hoy izy tamiko tamin'ny herintaona. “Tsy toy izany ny raiko. Mifikitra amin'ny olona izy.”
Ny Angondrakitra ho an'ny Niharam-boina tao Xinjiang  no angondrakitra lehibe indrindra amin'ny fiteny Anglisy mifandraika amin'ireo niharam-boina tamin'ny famoretana mitohy ao XUAR.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/22/135053/
 Kaliolla Tursynuli: https://shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=167
 Venera Mukatai: https://shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=166
 toby fiarenana: https://globalvoices.org/2018/10/23/as-china-legalizes-xinjiang-re-education-camps-party-affiliated-media-weibo-netizens-cheer-on/
 Nilaza ireo manampahefana: https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-insight/china-says-pace-of-xinjiang-education-will-slow-but-defends-camps-idUSKCN1P007W
 ho antony: https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/kazakh-families-torn-apart-in-chinas-xinjiang-crackdown/
 Angondrakitra ho an'ny Niharam-boina tao Xinjiang: https://shahit.biz/eng/